Afghanistan: Maxaa loo waayay hoggaamiyha Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar? - Bulsho News
Xigashada Sawirka, SEFA KARACAN/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES
Farriin cod ah oo lagu soo duubay WhatApp-ka oo Isniintii laga soo saaray xafiiska siyaasadda ee ay Taliban ku leedahay magaalada Dooxa kasii daayeen kooxda Taliban ayaa markii ugu horreysay looga jawaabay warar la isla dhex marayay oo ku saabsanaa in la waayay Mullah Abdul Ghani Baradar, oo ah Ra’iisul Wasaare ku xigeenka maamulka Taliban, ahna madaxa xafiiska siyaasadda.
Codkan oo uu shaaciyay Dr. Mohammad Naeem, oo ka tirsan saraakiisha xafiiska siyaasadda laga maqlayaa hadalka Baradar oo ka warramaya waxa uu ku maqnaa.
“Warkan wuxuu maalmo badan ku faafayay baraha bulshada. Maalmahaas waxaa ku guda jiray safarro, meel ayaana ku maqnaa. Alle ayaa mahad leh, aniga iyo dhammaan saaxiibbadeenba waan caafimaad qabnaa. Mar walba warbaahinta badankood beentaas ayay naga sheegaan,” ayuu ku yiri farriinta codka ah.
12-kii bishan September ayaa warqad la iskula wadaagayay WhatsApp-ka iyo Facebook-ga lagu sheegayay in ay soo baxeen warar sheegaya in Mullah Abdul Ghani Baradar uu si xun u dhaawacmay xoogaa kaddibna uu dhaawicii u geeriyooday.
Hadal-heynta ayaa cirka isku sii shareertay kaddib markii Mullah Abdul Ghani Baradar laga waayay shir ay hoggaanka Taliban la yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Qadar, kaasoo muuqaal ahaan loo baahiyay Axaddii.
Laakiin Taliban ayaa dhammaan wararkaas ku tilmaantay kuwo aan sal iyo raad toona lahayn.
‘Mullah Baradar ma dhaawacmin ee wuu careysan yahay’
Bayaan kasoo baxay Taliban ayaa lagu sheegay inMullah Baradar uu ku sugan yahay magaalada Qandahar, halkaasoo uu kula kulmayo hoggaamiyaha sare ee Taliban, Mullah Hebtullah Akhundzada.
“Waxa uu magaalada Kabul ugu soo laaban doonaa sida ugu dhakhsiyaha badan,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Hase yeeshee, labo qolo oo xog ogaal ah ayaa BBC-da u sheegay in Khamiistii lasoo dhaafay ama Jimcadii uu muran culus dhex maray Mullah Abdul Ghani Baradar and Khalil-ur-Rahman, oo ah wasiir ka tirsan garabka Xaqaani.
Taageerayaasha labada dhinac ayaa sidoo kale uu meel xun ka gaaray hadalka, sida ay ilo wareedyada sheegeen. Mullah Baradar oo ka careysan dowladda cusub ee Taliban ayaa markii dambe u anbabaxay magaalada Qandahar.
Hoggaamiyeyaasha Taliban, Hibtollah Akhundzada iyo Mullah Abdul Ghani Baradar
Sida ay ilaha xog ogaalka ah ku warrameen, markii uu Mullah Baradar sii baxayay waxa uu sheegay in uusan dooneynin dowlad noocaas ah.
Hase yeeshee, BBC-da si madax bannaan uma aysan xaqiijinin arrintan.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ismaandhaaf uu horayba ugu dhaxeeyay shabakadda Xaqaani iyo Taalibaanka Qandahar, uuna sii xoogeystay markii ay kooxdu gacanta ku dhigtay caasimadda Kabul.
Xubno ku kala sugan Dooxa iyo Kabul ayaa laga soo xigtay in markii la dhisay dowladda cusub ee Taliban uu Mullah Abdul Ghani Baradar uu sheegay “in uusan rabin dowlad ka kooban wadaaddada Taliban oo kaliya”.
Ilo wareedyada ayaa intaas ku daray in Mullah Baradar uu sheegay in 20-kii sano ee lasoo dhaafay uu helay khibrad badan iyo ballanqaadyo ay siiyeen Beesha Caalamka intii uu ku sugnaa xafiiskooda siyaasadda ee dalka Qadar, sidaas awgeedna uu doonayay inuu dhiso dowlad ay qayb ka yihiin haweenka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay ee kasoo kala jeeda dhammaan qaybihiisa kala duwan.
Xogo kale oo laga soo xigtay xubno ka tirsan Taliban ayaa sheegay in kala aragti duwanaanta ay muddo dheer jirtay laakiin markii dowladda cusub la dhisay ay dhammaan dhinacyada wada aqbaleen.